Yaadni kun yaada qajeelaa fi eebbifamaa ta’uu waakkachuu yeroo dadhaban akkaataa hujiitti hikamuu danda’amuu isaa irratti namoonni mamii kaasan ni jiru. Hundeen mamii kanaa tokko gaaffii empaayerri akkamitti dimokraatawa jedhuu irraa madda. Read More
Lolli, wal dhabbiin, mormii fi bortaan walitti bu’uun jireenya ilma namaa keessatti kan ture garafuulduraa illee kanuma jiraatuu dha. Haalli kun sadarkaa jireenya nam tokkee irraa kaasee hanga sadarkaalee maatii, gurmuu, sabaa fi motummoolee gidduutti mul’achaa turan fuuldura ille hinuma jiraatu. Lollii fi wal dhabbiin kun tokko tokko ifatti mul’atu; kaan ammo dhoksaa fi garaa keessatti osoo walnyaatanii, yeroo eeggatanii gadi bahu. Hundee fi madda wal dhabbii sababoota ta’an keessa kan akka sirna gita bittaa fi bitamaa gidduu , addaa addummaa kaayyoo , aangoo fi bu’aa, ilaalchaa xalilawaa fi itti gala akeekaa sirritti walhubachuu dhabuu irraa shakkii keessa galuun sababoota gurguddaa keessaa haga tokko. Waldhabdeen ykn lolli kunis gariin haasaa nagaan, gariin ammoo afan qawween furmaata argatu.
Addi Demokratawaa Oromoo(ADO) ummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa, qabeenya isaa irratti abboomaa, jireennya isaa irratti murteessaa ta’ee saboota biyyattii hundaa waliin sirna mootummaa Federaalaa dhugaa, kan dimokiraasii, haqaan bulmaataa, fi wal qixxummaan keessatti dagaagu uumuu akeekkatee socho’a.
Ejjannaan kunis tarkaanfii bara 1991 booddee Itoophiyaa gara federeshina sabootaatti caasessuudhaaf fudhatame ka’umsa godhachuu dhaani. Tarkaanfii qajeelaa kana keessatti ashaaraan ABO fi qabsaa’ota Oromoo kan warra hangafaa har’as akka aduu ganamaatti keessaa hanga’a. Kana irratti dabalees gaafa akka ammaa kana kan maqaa fi fakkeessaa ta’uun hafee dhugaan federeshina sab-daneessaatti itiopiyaan ijaaramtu empaayerummaan biyyattii akka raawwatu qabsa’ota Oromoo keessaa kanneen maman ni xiqqaatu.
Addi Dimokiraatawaa Oromoo (ADOn) akka dhaaba siyaasaa rakkoowwan uummata Oromoos ta’ee kan biroo waggoota dheeraadhaaf turaniif furmaata waaraa argamsiisuudhaaf dhaabbate tokkootti waan biyya sana keessatti adeemaa jiru dhiyeenyaan hordofa.
Dhaggeesffattoota keenyaa Dhalootaa fi Imala Adda Dimokraatawaa Oromoo mata duree jedhu jalatti qopheen nuti fudhannee dhihaanne, Bu’ureeffama Adda Dimokraatawaa Oromoo fi deemsa isaa fuula duraa irratti hubannaaf qophee dhihaatee dha.
Akkuma beekamu Addi Dimokiraatawaa Oromoo maqaa amma qabu kana qabatee osoo as hin ba’inii fi waltajjii Marii Oromoon beekamaa turetti, ganna tokko darbe kana keessa qorannaa fi maree bal’aa taasisaa ture. Qorannaa fi mare isaa kanaanis Qabsoon bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf deemaa turee ABO dhalche , waggoota afurtaman darban keessatti wareega heedduu baasee, bu’aa hin tuffatamni argamsiisellee rakkoo keessaan qabamee gaadi’amee of dura tarkaanfachuu dadhabuu ta’ee arge.
ABO dhibee keessaan qabamee, waldhabee, gargar qoqqoodamee, rakkoo keessa isaa nagaan furachuu hanqachuun ammoo;
Kaayyoon Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) ummatni Oromo bittaa halagaa jalaa bayee, biyya ofii irratti abbaa biyyummaa isaa deebifatee, mirga guutuu qabaatee ofiin of bulchaa, mootummaa biyyoolessaa Itiyoophiyaa keessatti ammoo uummattoota biyyittii kan fedhii fi hawwii sirna diimookiraasii jalatti buluu qaban hunda waliin ta’uudhaan mootummaa Federaalaa kan sirna diimookirasii dhugaatiin gaggeeffamu ijaaruudha. Isa kana dhugoomsuunis Oromoon akka saba guddaa hundee biyyittii ta’e tokkootti aangoo polotikaa isa fakkaatu akka qabaatu taasisuudhaaf qabsaawuudha. Kana jechuun biyyi/lafti Oromiyaa handhuura biyyittii, qabeenyi Oromiyaaa utubaa diinagdee biyyittii, sabni Oromoo immoo madaaluma kamiinuu uummata guddaa waan ta’eef dhimmi Oromoo ilaalu sabaaf sab-lammoota biyya sanaa hunda karaa gara garaatiin kan ilaalu ta’uu isaa hubannaa keessa galchuudhaan qabsoo sirna diimookiraasii dhugaa biyya sana keessatti diriirsuudhaaf taasifamaa jiru keessatti Oromoon akka saba guddaa tokkootti gayee guddina isaa wajjin wal madaalu akka taphatu taasisuu jechuudha.